Mbola nisy fiainana niova ho fiainana amin'ireto sary sokitra ireto | Famoronana an-tserasera
ny ravina maty mandainga eny ambonin'ny ala sy valan-javaboary izy ireo dia mety ho lasa singa tonga lafatra amin'ny endrika sary sokitra hafa toa ilay hitantsika amin'ny tanan'ny artista antsoina hoe Susanna Bauer.
Bauer manoratra a sary sokitra tany am-boalohany izay ny loko volontsôn'ny raviny maina dia mitana andraikitra lehibe rehetra hitarika antsika hamakivaky ny fiainana mandritra ny fiainana milamina. Ny fatiantoka sy ny hanim-py dia mifangaro ao anatin'ity asa feno hafanana ity. Ireo ravina ireo dia saika aparitaka amin'ny sombin-javatra kely marobe mba hahavery endrika sy hamindra ny firafitr'io tany misy azy io
Bauer dia mitahiry mitazona azy ireo mandritra ny fotoana mandeha mba hampiasa ny endrik'izy ireo amin'ny karazana motifs sy spektera rehetra, toy ny sary sokitra hitanao zaraina eto. Ilay mpanakanto mihitsy no mitady fifandanjana amin'ny sangan'asany handokoana ny andalana eo anelanelany marefo sy tanjaka. Ny fihenjanana sy ny hamamin'ny fifandraisan'olombelona dia iray amin'ireo dikany izay tiany halamina amin'ity asa miavaka ity.
Ampiasao ireo ravina maina hanodinana azy ireo ary avadiho ho endrika miendrika grid izy ireo toy ny hoe ravina hazo izy ireo na manodinkodina sary amin'ny karazana ravina hafa miaraka amin'ny hatsaran-tarehy tena miavaka, toy ny hita ao amin'ilay sary sokitra izay misy loko roa mifangaro hanehoana firafitra marefo.
Bauer dia mahazo ireo sampana ireo ravina malazo sy ireo fotoana kely ireo ny fiainana mbola velona hamoronana andiam-sary sokitra izay mamorona asa lehibe amin'ny ankapobeny. Fiantsoana ny dikan'ilay nanjary tsy mananaina intsony nefa afaka miverina aminy amin'ny tananao sy ny asan'io sary sokitra io azonao arahana ny tranokalanao. Ianao dia manana ny instagram y Facebook hitazomana hatrany amin'ireo tetik'asa vaovao.
Mankany amin'ny varahina izahay amin'ny sary sokitra an'ity mpanakanto ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ravina maina toy ny sary sokitra nataon'i Susanna Bauer